GeForce RTX 2080 Ti ထက် 20%ပိုမြန်တယ်ဆိုတဲ့ GeForce RTX 3080
High-end Chip နေရာမှာ Turing ကတ်ထက် 20% ပိုမြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ Ampere GPU
Nvidia အနေနဲ့ 7nm Process ပေါ် အခြေခံ ထုတ်လုပ်ထားမယ့် Ampere ကတ်တွေ မကြာခင် ကာလအတွင်းမှာ မိတ်ဆက်တော့မယ်လို့ ကြားသိထားရတဲ့အတိုင်း ယခုတဖန် ပြန်လည် ပေါက်ကြားလာတဲ့ သတင်းက Performance Comparison ပုံစံမျိုးပါ။
ဒိမတိုင်ခင် Early Suggestion နဲ့ Leak News တွေမှာ GeForce RTX 3060 လို ကတ်မျိုးက GeForce RTX 2080 ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်တယ်လို့ ပေါက်ကြားခဲ့ပေမယ့် သေချာရေရာတဲ့ အဖြေမျိုးလို့ သုံးသပ်မရခဲ့ပါဘူး။
Faster than GeForce RTX 2080 Ti
ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ Maxwell ကနေ Pascal ခုန်တုန်းကလို အနေထားမျိုး Mid-range Chip က High-end Performance အသာလေး ကျော်တက်ခဲ့ပေမယ့် Ampere နဲ့ Turing မှာ Performance Gap က အရမ်းမကွာဘူးလို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဒါကို အခု ပေါက်ကြားထားသလို မျိူးတူချင်းဖြစ်တဲ့ (ဥပမာ GeForce RTX 2080 vs RTX 3080) အရမ်း ကွာဟနေတဲ့ အနေထားမျိုး ဖြစ်ဖို့ အလားလာ နည်းလို့ပါ။
ဒီလိုပြောရတဲ့ အကြောင်းပြချက်က Twitter စာမျက်နှာမှာ တင်ထားခဲ့တဲ့ Leaker တစ်ယောက်ကြောင့် ဖြစ်ပြီး Flagship Tier မှာ 20% ပိုမြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကြောင့်ပါ။
The RTX 3080 has about 20% increase compared with RTX 2080 Ti
— KatCorgi (@KkatCorgi) July 21, 2020
Could be performance leap
ဒါကို GeForce RTX 3080 နဲ့ RTX 2080 Ti နှစ်ကတ် ယှဥ်ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တန်းတူအနေထား သုံးသပ်ရတဲ့ GeForce RTX 2080 ထက် 50% မြန်ဆန်မယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူအဆိုရ သိရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ Leaks မှာ ထောက်ပြခဲ့တဲ့ GeForce RTX 20-series ထက် Ampere တွေ 7nm ကတ်တွေ 50% ပိုမြန်တယ်ဆိုတာ လက်ခံရမလိုလို
နောက်တမျိုး Translate လုပ်ရင်တော့ 4K မှာ 50% ၊ 1,440p (QHD) မှာ 40% ဆိုပြီး GeForce RTX 2080 Ti ထက် Performance Gain ဖြစ်လာမယ်လို့ ဆိုနိုင်သလို Pascal ကနေ Turing ခုန်တုန်းက ကွာခြားမှုပမာဏ နီးစပ်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Wccftech အဆိုရ GeForce RTX 2080 ဟာ 4K မှာ 40% ၊ 1,440p မှာ 30% အသီးသီး GeForce GTX 1080 ထက် မြန်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလို Performance Leap ဖြစ်လာပေမယ့် GeForce RTX 20-series Super ကတ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ထားတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး (သို့ပေမယ့် အောက်က ဇယားမှာ ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်)
Similar to previous comparison
ဒါကြောင့် Ampere Chip တွေဟာ Close Range မှာ 20% Lead အနေထားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ထားနိုင်ရင် Top Tier ကတ်အနေနဲ့ မြင်ရနိုင်တဲ့ GeForce RTX 3080 Ti လို ကတ်မျိုးက 40% (သို့) 50% ပိုမြန်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
သို့ပေမယ့် Turing ရော Pascal ကတ်တွေထက်ပါ Power Consumption ပိုများလှသလို Rumours တွေအရ 320W အတွင်း သုံးစွဲမှုရှိမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။
အခုလို အနေထားအတိုင်း ထမင်းလုံးစီသလို ပြန်ပြောရရင် GeForce RTX 3070 ကသာ GeForce RTX 2080 Ti နဲ့ Close-up ဖြစ်နေမယ်လို့ သုံးသပ်ရပြီး စာဖတ်သူတွေ မြင်သာအောင် ပေါက်ကြားထားတဲ့ Specification ကို ဇယားလေးနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Card Name GPU Cores (SMs) Memory Memory Bus Bandwidth
NVIDIA Titan RTX (2nd Gen) Ampere GA102-400 5,376 (84) 24 GB GDDR6X 384-bit ~816 GB/s
NVIDIA Titan RTX (1st Gen) Turing TU102-400 4,608 (72) 24 GB GDDR6 384-bit 672 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere GA102-300 5,248 (82) 12 GB GDDR6X 384-bit ~1.00 TB/s
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Turing TU102-300 4,352 (68) 11 GB GDDR6 352-bit 616 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere GA102-200 4,352 (68) 10 GB GDDR6X 320-bit ~760 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 2080 Turing TU104-400 2,944 (46) 8 GB GDDR6 256-bit 448 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Ampere GA104-400 3,072 (48) 8 GB GDDR6X 256-bit ~512 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Turing TU104-410 2,560 (40) 8 GB GDDR6 256-bit 448 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere GA104-300 2,944 (46) 8 GB GDDR6 256-bit ~512 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 2070 Turing TU106-400 2,304 (36) 8 GB GDDR6 256-bit 448 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Turing TU106-410 2,176 (34) 8 GB GDDR6 256-bit 448 GB/s
NVIDIA GeForce RTX 2060 Turing TU106-200 1,920 (30)6GB GDDR6 192-bit 336 GB/s
Ampere ကတ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တုန်းက ပေါက်ကြားခဲ့သလို 12-pin Power Connector အသစ် ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြး ထုထည်ကြီးမားလှတဲ့ Heatsink နဲ့ ပန်ကာနှစ်လုံးကို Cross လုပ်ထားတဲ့ပုံနဲ့ တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။
နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြလိုတာက Ampere အပြိုင်ဖြစ်လာမယ့် AMD ရဲ့ Big Navi ပဲ ဖြစ်ပြီး အခု GeForce RTX 3080 ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ? စိမ့်ထွက်နေမယ့် တန်ဖိုးနဲ့သာ မကြေညာဖို့ မျော်လင့်ထားလား?
Modern 14 အသစ်ကို 10th Gen Intel ၊ Ryzen 4000 Series Processor နဲ့ ကြေညာလိုက်တဲ့ MSI
Mi Mix4ကို ထင်မှတ်မထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ မြင်ရနိုင်မလား? Just Opinion